> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan MP4 in VOB
VOB waa qaab DVD-Video. Haddii aad isku dayayaan in ay badalo MP4 in VOB ku dul gubaa DVD in la DVD ciyaaryahanka ka ciyaaro, ama haddii aad rabto in aad si loogu badalo MP4 in VOB u habaynta ama wax kale, software lagu taliyey in qodobkan uu noqon doono dooqa ugu fiican ee aad.
Best MP4 in VOB Converter for Windows / Mac (El Capitan ka mid ah)
• Si toos ah loogu badalo MP4 in VOB (DVD-Video), AVI, MKV, MOV, iyo wax kasta oo kale oo ah qaabab video oo caan ah.
• Gubashada MP4 in DVD disk inaan la ciyaaro DVD ciyaaryahan aad ugu 30X xawaaraha ugu dhaqsiyaha badan.
• presets diinta filaayo in iDVD, iMovie, Pro Goo Final, iyo Apple kasta ama qalabka Android.
• videos Edit leh hawlaha video tafatirka sare sida falinjeeerka, lana siii, isagoo intaa ku daray subtitles, iwm
• Ku dar metadata in videos bixi ama macmal ah si iyaga ka dhig sida kuwa Lugood bixisay.
# 1 Video Converter Ultimate: Sida loo gubi MP4 in DVD disk u si fudud Radidiyaha la DVD ciyaaryahan
# 2 Video Converter Ultimate: Sida loo badalo MP4 in VOB u habaynta ama qaar ka mid ah sababo kale
# 3 More doorasho: MP4 Free in VOB Converter
# 4 Isbarbar: Dooro MP4 ugu wanaagsan ee VOB Converter
# 1 Sida loo gubi MP4 in DVD disk u si fudud Radidiyaha la DVD ciyaaryahan
Waxaan kuu sheegi doonaan sida ay gubaan ama badalo MP4 in DVD for Windows (Windows 10 ka mid ah) ee hoos ku. Haddii aad rabto in aad ogaato sida ay gubaan MP4 DVD inay u Mac (Mavericks ka mid ah), riix halkan .
1. file MP4 Import
Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda MP4 si DVD Converter, kaliya riix "Guba" tab on sare ee interface ka. Ka dibna waxaad si toos ah u soo jiidi kartaa jeedi file MP4 u galay. Ama waxaad riixi kartaa batoonka this inay dajiyaan file MP4 ah.
2. Codso ugu arrimo DVD menu dhisay-in (optional)
Waxaad samayn kartaa DVD aad wax badan ka sii xirfad ay ku daray qaar ka mid ah arrimo menu. Just guji "Change marto" button Midigta sare ee interface ka, ka dibna dooro mid aad ugu jeceshahay.
Fiiro Gaar ah: Tani MP4 in DVD Converter kuu ogolaanaysaa inaad gubi MP4 in disk DVD, files ISO ama DVD folder. Kaliya Waxaad dooran kartaa qaabka aad la doonayo in ay "Guba in" button.
3. Start si ay u gubaan / badalo MP4 in DVD
Halkan riix "Guba" button on xaq hoose ee interface ka. Aad Ugu dambeyntii heli doonaa MP4 gubay in disk DVD in dhowr daqiiqo ah.
# 2 Sida loo badalo MP4 in VOB u habaynta ama qaar ka mid ah sababo kale
1. Ku dar MP4 video files si MP4 si Converter VOB
Tag "Beddelaan" tab menu ka dibna riix "Add Files" button. Ka dib markii in, videos MP4 waa laydiinku dari doonaa si ay leeg- ee barnaamijkan.
2. Dooro VOB ama DVD sida qaab wax soo saarka
In qaabka wax soo saarka daaqadan app ee, kaliya ay doortaan qaab VOB sida qaab wax soo saarka. Si aad u sameyso, waxaad ka dhacay kartaa "qaab" icon dhankiisa midigta oo ah "Beddelaan" interface, ka dibna tag "qaab"> "Video"> "VOB".
3. U beddelaan MP4 in VOB
Guji "Beddelaan" on geeska hoose ee midigta ah interface ugu weyn ha app this badalo files MP4 in files VOB.
Ok, waxaa lagu sameeyey oo. Ka dib markii daqiiqadii dhawr, waxaad ka heli kartaa file VOB galka wax soo saarka ah.
Video Tutorial: Sida loo badalo MP4 in VOB for Windows (Windows 10 ka mid ah)
# 3 MP4 Free in VOB Converter for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
• A dhamaystiran MP4 FREE in Converter VOB aan watermark.
• freeware Nadiifi oo awood badan leh oo fudud oo toos ah design.
• Mid ka mid ah click soo bixi YouTube videos at xawaaraha ugu dhaqsiyaha badan.
• tam aad MP4 video by falinjeeerka, lana siii, isagoo intaa ku daray saamaynta, iwm
OS taageerayaan: Windows NT4 / 2000/2003 / XP / Vista / 7/8, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9
Fiiro gaar ah: tutorial ee Video Converter Free la mid tahay Video Converter Ultimate, ama waxaad riixi kartaa halkan si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
VOB & caadi videos kale VOB & videos kale ee caamka ah, 3D iyo HD
Presets u Devices
Download YouTube videos Kaliya
Download YouTube, Dailymotion, videos Facebook, iwm
Kaliya waxaa loo isticmaali karaa 10 beddelaad Waxaa loo isticmaalaa in beddelaad aan xad lahayn
Guba MP4 in DVD
Ku dar metadata
Waa caadi in la beddelo MP4 in VOB. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad loola jeedo in lagu beddelo MP4 in VOB, iyo daawado filimka ciyaaryahanka DVD ah, inaad si fiican u isku dayi lahaa Video Converter Ultimate hoos ku qoran.
Hel Video inay DVD on Windows / Mac - Best Video inay DVD gubidda
Sida loo rogo ama MTS in DVD si fudud oo dhaqso
Sida loo Beddelaan AVI in VOB